Viz Vectar Plus: Manome famokarana tsy misy fetra | NAB Show News | 2020 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Featured » Viz Vectar Plus: Manome famokarana tsy misy fetra
Viz Vectar Plus: Manome famokarana tsy misy fetra
Viz Vectar Plus dia lozisialy mifototra amin'ny IP, izay mitondra vahaolana amin'ny famokarana mivantana ho an'ireo fampielezam-peo lehibe sy mpamatsy atiny media amin'ny toerana rehetra. Ny mpampiasa izao dia afaka mifamadika, mifangaro, ary mamokatra karazana famokarana mivantana ho an'ny fahitalavitra, Internet, ary ny fizarana finday rehefa mamafa ny "fetra nentim-paharazana" amin'ny endrika haino aman-jery, I / O, fantsona ary fandefasana. Viz Vectar Plus dia manome ny fahafaha-manana manana fahefana hanolotra safidy fanamboarana avy amin'ny tontolo iainana na ao anaty Cloud ary manana fahaizana miasa ao anatin'ny fotodrafitrasa isan-karazany.
Live Call Connect dia tafiditra ao amin'ny Viz Vectar Plus, ary mampiasa ny rindranasa antso an-tsary rehetra toa ny, Skype ™, MS Teams ™, Zoom Meetings ™, Discord ™, sy ny maro hafa. Ny mampiavaka an'io sehatra io dia ny Live Call Connect mamorona mpandray anjara amin'ny kaonferansa ho loharanom-pahalalana samihafa, na inona na inona sehatra, hanaterana safidy famoronana tsy tambo isaina, izay azon'ny mpampita haino aman-jery na mpamatsy votoaty haino aman-jery rehetra ampiasaina amin'ny fitaovana famokarana mavitrika kokoa.
"Viz Vectar Plus dia natao tokoa ho an'ireo mpitantara tantara ankehitriny izay mahita ny fomba taloha lasa lany andro, sarotra ary mandrara vola. Amin'ny fanomezana fehezan-teny malefaka, ny mpanjifa dia afaka mamorona atiny kalitao bebe kokoa,
afaka amin'ny vidiny mialoha mialoha, ” hoy i Daniel Nergard, filohan'ny Vizrt Global. “Live Call Connectvery dia manokatra fomba mora foana hanangonana mpilalao sarimihetsika bebe kokoa amin'ny tantara, na aiza na aiza toerana misy azy ireo
na safidin'ny fampiharana. ”
Premiering ao amin'ny Viz Vectar Plus dia Audio Connect, ity fanitarana tsy mampino ity dia mampiasa teknolojia NDI izay mampifamatotra ny zava-drehetra. Ny fikorianan'ny asa audio dia ahafahana mampiditra fampifangaroana feo sy fanodinana rindrambaiko feno ho an'ny fitomboan'ny fahalalahana. Fampiasana fidirana rafitra vaovao iray ahafahana manaova kinova marobe amin'ilay fandaharana iray ihany izay afaka mandamina ny endrika isan-karazany, ny vahaolana ary ny sary miaraka amin'ny fivoahana miaraka. Ity endri-javatra ity dia manana mpilalao haino aman-jery natsangana, fandraketana, streaming, audio, ary fanaraha-maso sary Viz Vectar Plus dia mampiasa fitaovana informatika mahazatra sy fotodrafitrasa misy tambajotra miaraka amin'ny fifandraisana IP izay ahafahan'ny studio, tobim-pianarana marobe ary toeram-pandraharahana mamaly ny fangatahana. Loharanon-tsary IP saika tsy voafetra ao anatin'izany SMPTE 2110, NDI, SRT, RTMP, RTP, HTTP, SRC, dia azo idirana ary ampiasaina miaraka, manome fifandraisana amin'ny karazana fitaovana media, anisan'izany ny NDI® | HX Camera app azo ampiasaina amin'ny finday avo lenta.
Viz Vectar Plus dia mamela ny fahafaha-manao ara-barotra sy ny fidirana ho an'ny tontolon'ny mpampiasa, ary azo ampiasaina haingana ihany koa isam-bolana. Vidina ny drafitra $ 2,995 USMSRP isam-bolana. Iray volana ny fe-potoana faran'ny fifanarahana farafaharatsiny. Viz Vectar Plus dia ho hita manomboka amin'ny Oktobra 2020. Mety hiovaova ny vidin'ny iraisam-pirenena.
*FANAMARIHANA: Ny fidirana mivantana amin'ny Call Call dia nampidirina maimaimpoana ho an'ny fe-potoana fifanarahana voalohany ho an'ny baiko rehetra Viz Vectar Plus natao talohan'ny 31 Desambra 2020.
Vizrt, fohy ho an'ny Visualization in Real-Time na Visual Artist, dia orinasa norvezianina namorona fitaovana famokarana atiny, fitantanana ary fizarana votoaty ho an'ny indostrian'ny media nomerika. Vizrt no mpamatsy fitaovana fitantarana an-tsary erak'izao tontolo izao ho an'ny mpamorona atiny media amin'ny indostrian'ny fampielezam-peo, fanatanjahantena, nomerika ary esports. Vizrt manolotra vahaolana famaritana rindrambaiko mamaritra ny tsena ho an'ny sary 3D amin'ny fotoana tena izy, filalaovana horonantsary, automatisation studio, famakafakana fanatanjahan-tena, fitantanana ny fananana haino aman-jery, ary fitaovan'ny tantara mpanao gazety. VizrtNy fampanantenany dia ny hifehezana ny fahasarotana sy ny fampitomboana ny famoronana. Maherin'ny telo lavitrisa ny olona mijery ny tantara notantarain'i Vizrt mpanjifa isan'andro ao amin'ny orinasam-baovao toy ny CNN, CBS, NBC, Fox, BBC, BSkyB, Sky Sports, Al Jazeera, NDR, ZDF, Network 18, Tencent, ary maro hafa. Vizrt dia ao anatin'ny Vizrt Mivondrona miaraka amin'ireo marika rahavaviny, NewTek ary NDI®. Vizrt manaraka ny tanjona tokana an'ity vondrona ity; tantara maro kokoa, nambara tsara kokoa. www.vizrt.com
Matio dia niasa tao amin'ny sehatra tsy miankina sy amin'ny fampianarana ambony nandritra ny 25 taona. Notsinjaraina manokana momba ny sehatry ny fitantanana ny tetik'asa nomerika, ny injeniera sy ny famokarana media. Manana fahalalana betsaka i Matthew amin'ny famokarana lahatsoratra nomerika, ny fitantanana ny fananana dizitaly, ny famokarana sinema nomerika ary ny fampifangaroana trano fampitaovana. Atoa Harchick dia nanao fikarohana tamim-pahavitrihana momba ny fampahalalam-baovao ara-javakanto, fanodinana sinema nomerika sy teknolojia ara-peo matotra ho an'ny fampiharana ny mpanjifa ary azo atokana ho an'ny filan-kevitra momba anao.
Viz Vectar Plus: Manome famokarana tsy misy fetra - Septambra 22, 2020
2020 #NABShow: Paviliona CineCentral! - March 9, 2020
2020 #NABShow: Efa nandalo ny fonao ve ianao? - March 4, 2020
Previous: Rebecca Eskreis 'Izay mamaky ranomandry "amin'ny Premiere amin'ny Fetiben'ny horonantsary Woodstock
Next: Magewell hanehoana ireo fanavaozana Pro AV ho an'ny tontolo miovaova ao amin'ny InfoComm China